Rita, Writing for My Sake!: လင်္ကာရည်ကျော် စာအုပ်များ
Posted by Rita at 8/12/2011 11:24:00 AM
သူ့စာ အတိုအရှည် တစ်ပုဒ်မှကို မဖတ်ဖူးသေးတာ ရီတာရေ။ သူငယ်ချင်းဆရာဝန်တစ်ယောက်ရဲ့ဆရာပဲ။ သူငယ်ချင်းပြောပြလို့ ဆရာ့အကြောင်း ကြားဖူးလိုက်တာ။
Cathy Nicholas said...
ကျမကတော့ သူ့ဇာတ်ကောင်တွေ အပြစ်ကင်းတာကို ကြိုက်တယ်။ ကျမကိုယ်တိုင်လည်း ကျမရဲ့ ဇာတ်ကောင်တွေကို သဘာဝကျကျဆိုးသွမ်းနေတာထက် လူတွေလေးစားအတုယူရတဲ့ ဇာတ်ကောင်းမျိုးပဲ အလိုရှိတယ်။ ဒါဟာ စာရေးသူတစ်ယောက်ရဲ့ လောဘလို့ ပြောလည်း ရသလို စေတနာလို့ပြောရင် ပိုမှန်ပါတယ်။ ကြိုးကြာ တောင်ပံခက်သံကို ကျမ အရမ်းကြီး မနှစ်သက်ဘူး။ မကောင်းလို့မဟုတ်ပါ။ ချင်းတောင်လတ်ငြိမ်းကို ကျမ ဒီထက် ပိုပြီး မျှော်လင့်ထားလို့ပါ။ ဒီလိုဇာတ်ရုပ်ကိုတောင် သူရဲကောင်း စရိုက်ဆန်တယ်ထင်တဲ့ လူတွေနဲ့ တော့ ကျမမျှော်လင့်ထားတဲ့ လတ်ငြိမ်းက ပိုဝေးသွားလိမ့်မယ်။
လူတိုင်းမှာ သူ့စံနဲ့သူ သူ့အတိုင်းအတာနဲ့သူပါပဲ။
ခုနောက်ပိုင်းတော့ သိပ်အပြစ်ကင်းတာတွေ ဖတ်ရရင် သဘောမကျတတ်တော့ဘူး။ ရင်ထဲလည်း သိပ်မရောက်ဘူး။
စာရေးသူက ဖန်တီး လုပ်ယူထားပုံပေါက်နေရင်လည်း ဇာတ်ကောင်ကို ခံစားလို့မရတော့ဘူး။
လက်တွေ့နဲ့ ဝေးကွာတာတွေရေးနေလည်း စိတ်ကူးယဉ်ချင်သူတွေအတွက် ယဉ်လို့သာ ကောင်းတာ။ အဲဒါနဲ့ လူကို၊ လောကကြီးကို ပြောင်းပစ်နိုင်တာ မဟုတ်ဘူး။ အနုပညာမြောက်တယ်လို့တောင် ဆိုနိုင်ချင်မှ ဆိုနိုင်မယ်။
ဒါပေမဲ့ ဘယ်သူ ဘယ်လိုသဘောထားထား ကြိုက်တဲ့လူက ကြိုက်တာ ရှာဖတ်ပြီး၊ မကြိုက်တဲ့လူက ကျော်သွားမှာပဲ။ သိပ်လည်း အရေးကြီးလှတာ မဟုတ်ပါဘူး။ it's just IMOO.
အင်းးး သူအကြိုက်နဲ့ သူပါပဲ။ ကျမက ဆရာလယ်တွင်းသားစောချစ်ပြောသလို ဇာတ်ကောင်စရိုက်ကို ပုံတူကူးချတတ်လို့ ထိန်းနေရတယ်။ ကျမတို့လို လူတွေကျတော့ ဆရာတို့ရဲ့ ဇာတ်ကောင်တွေက role model ပဲ။ ဇာတ်ကောင် စရိုက်ကို ကူးတာကတော့ လူငယ်တိုင်းဖြစ်မယ်ထင်တယ်။ အနဲအများပဲကွာမှာပေါ့လေ။ ဆရာရဲ့ ဇာတ်ကောင်တွေဆို ကျမ အားကျ လေးစားရတဲ့ စရိုက်တွေများတယ်။သူတို့ရဲ့ ကြိုးစားပုံတွေ အတွေးအခေါ်တွေ ethic တွေက လက်ခံဖို့လည်း ကောင်းတယ် လေးစားစရာလည်း ကောင်းတယ်။ စာပေqualityကို အကဲဖြတ်တဲ့ အပိုင်းက ကြည့်ရင်တော့ ဘယ်လိုဘယ်ပုံ မပြောလိုပေမယ့် စာဖတ်သူတစ်ယောက် အထူးသဖြင့် လူငယ်စာဖတ်သူတစ်ယောက် အနေနဲ့ ကတော့ ဆရာ့ ဇာတ်ကောင်တွေ အပြစ်ကင်းတာကို ထောက်ခံချင်တယ်
ardan lay said...
ဆရာ အင်္ဂလိပ်လိုတွေကို အင်္ဂလိပ်လို ထည့်ပေးစေချင် တယ်
ကျွန်တော်က ဆရာဝန်မဟုတ်တောဲ့ဆရာပြောချင်တဲ့အင်္ဂလိပ်စာတွေကို သိပ်နားမလည်လို့ပါ
ဆရာ ပြောချင်တဲ့ အင်္ဂလိပ်စာတွေကို အင်္ဂလိပ်လိုပါ ထည့်ပေးစေချင်ပါတယ်